Hery Rajaonarimampianina : Atokisan’ny Japoney -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Atokisan’ny Japoney
21/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Niompana amin’ny fanomezana rano fisotro madio ho an’ny faritra Atsimo sy ny fampirantiana iraisam-pirenena ny taona 2025, ny dinika notanterahin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny minisi-panjakana misahana ny raharaham-bahiny Japoney Masahisa Sato omaly maraina. Nandritra ny fihaonan’ny masoivohon’i Japon miasa sy monina eto amintsika Ichiro Ogasawara. Tafiditra amin’ ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta ny fihaonana, taorian’ny dian’ny filoha malagasy tany Japon ny desambra 2017. Tamin’ izany no nanatanterahan’ny firenena roa tonta fanambarana fa “miditra amin’ny dingana vaovao ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta” ka izao efa tanteraka izao. Ny fahatongavan’ny minisitry ny Raharaham-bahiny eto Madagasikara dia tafiditra amin’ny fanaraha-maso ny fampiharana ny dinika arak’asa tany Japon. Sehatr’asa goavana maro mantsy no efa natomboka dia eo ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina, ny famatsiana rano fisotro madio ny Atsimo, ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, ary tsy hohadinoina ny orinasa Sumitomo ao amin’ ny tetikasa Ambatovy.
Taorian’ ny fihaonana dia nanamafy ny masoivoho Japoney Ichiro Ogasawara, fa hisy ny tombana amin’ny endriky ny fampiharana ireo tetikasa goavana, izay lohalaharana ho an’ ny filoham-pirenena malagasy, Hery Rajaonarimampianina. Ankoatra izay dia isan’ny voaresaka ihany koa ny mikasika ny tombontsoa iraisana eo amin’ ny sehatra iraisam-pirenena, ka isan’izany ny fanirian’ny firenena Japoney handray ny fampirantiana iraisan’ny rehetra (Universelle) ny taona 2025. Io hetsika io, izay tanterahina isaka ny dimy taona, ary lohahevitra hodinihina “ kajiana ny fiarahamonina amin’ ny ho avy, eritreretina ny fiainana amin’ ny ampitso”. Nahazo ny fanohanana avy amin’ ny firenena malagasy ny fanirian’ny tanàna Osaka, handray ity fampirantiana goavana ity, ary nanome tso-drano azy ireo ny filoham-pirenena malagasy, Hery Rajaonarimampianina. Mba ho fisaorana kosa dia notoloran’ny minisi-panjakana Masahisa Sato, sary mivaingan’i “Pikachu”, izay sary famantaran’ny firenena japoney amin’ ny ho avy ny filoha malagasy.